नेपाली समूदायको बृहत्तर हितका लागि मेरो उम्मेद्वारीः भरत पोखरेल - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपाली समूदायको बृहत्तर हितका लागि मेरो उम्मेद्वारीः भरत पोखरेल
प्रकाशित मिति: ९ असार २०७२, बुधबार June 29, 2015
आगामी चार जुलाईमा गैर आवासीय नेपाली संघ, (एनआरएन) अष्ट्रेलियाको निर्वाचन हुँदैछ । आगामी नेतृत्वका लागि भरत पोखरेल अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । पोखरेलले यसअघि अष्ट्रेलिया एनआरएनको कोषाध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको समस्या, भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण र एनआरएन निर्वाचनका विषयमा पोखरेलसँग असनेपाल न्यूजले गरेको कुराकानीः
तपाइको चुनावी अभियान कसरी अघि बढेको छ ?
म एनआरएन अष्ट्रेलियाको कोषाध्यक्ष र सचिव भएर काम गरिसकेकाले अध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारी स्वाभाविक थियो र साथीभाईले पनि त्यसरी नै लिनु भएको छ । अहिले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायहबीचको भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियालाई बाक्लो बनाएको छु । उहाँहरूको कुरा सुन्ने र सोही अनुसार आफ्नो योजना बनाउने कामलाई अघि बढाउने काम गरिरहेको छु ।
मैले निर्वाचनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छैन । यसअघि जसरी एनआरएनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्थे, साथीभाईका समस्या सुन्थेँ र समाधानका लागि पहल गथेँ अहिले पनि त्यही गरिरहेको छु । यसले गर्दा मलाई मसिनो किसिमले बुझ्न साथीहरूलाई अरू सजिलो भइरहेको छ र नजिकबाट मेरो मूल्याकंन गरिरहनु भएको छ ।
निर्वाचन जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यस अघि नेपाली समूदायले गर्नुभएको अभूतपूर्व विश्वास र अपार समर्थनका कारण निर्वाचन जित्नेमा म शतप्रतिशत ढुक्क छु ।
एनआरएन अष्ट्रेलियाको विभिन्न पदमा बसेर काम गरिसक्नुभएको छ, के नयाँ मुद्धा लिएर निर्वाचनमा होमिँदै हुनुहुन्छ ?
मैले नेपालमै रहेर पनि विभिन्न भूमिकामा जिम्मेवारी बहन गरिसकेको छु । हिमाल, पहाड र तराई सबै ठाउँमा उत्तिकै भिजेको छु । त्यहाँको सुख, दुःखसँग साक्षात्कार भएकाले मैले सबैको भावनाको यथोचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ ।
नेपाली समुदायलाई के गर्दा बढी फाइदा पुग्छ त्यो पनि मैले राम्रोसँग बुझेको छु । यसअघि २०११– २०१३ मा कोषाध्यक्ष हुँदा खडा गरेको सोसियल वेलफेयर फण्डमार्फत हामीले नेपाली समुदायका लागि राम्रा काम गरेका छौँ । बढीभन्दा बढी मानिसहरूको भावनाको समुचित उपयोग गर्न सकेका थियौँ । त्यसमा मैले कोषाध्यक्षको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको थिइनँ । होल प्रोजेक्टको डेपुटी को–अर्डिनेटरको समेत भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ ।
आफू कोषाध्यक्ष हुँदा एनआरएन अष्ट्रेलियालाई आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न पनि गरेँ र केही हदसम्म सफल पनि भएँ ।
आफ्नो मातृभूमी नेपालका लागि केही गर्नु भएन ?
म २०१३–१५ मा एनआरएन अष्ट्रेलियाको सचिव भएको थिएँ । त्यतिबेला हामीसँग जुझारू युवापंक्ति थियो । त्यो टीमले दुई वर्षमा उल्लेख्य काम ग¥यो । विराटनगर श्रद्धा संघको स्थापना, स्किल नलेज एण्ड इनोभेसनलगायत २१ वटा परियोजना त्यही कार्यकालमा सञ्चालनमा आए । जसमध्ये केही परियोजनाहरू निकै सफल पनि बने । हेल्थ डेस्कको स्थापना पनि गरियो ।
एनआरएनमा सबैको पहुँच भएन भन्ने गुनासो छ नि?
हामीले संघको विधान परिवर्तन गरेर सदस्यता वितरणलाई प्रभावकारी बनाएका छौं । परिमार्जित विधान अनुसार सदस्य संख्यालाई कसरी बढाउने र सबैको पहुँचमा एनआरएन लैजाने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । नयाँ विधान अनुसार केही साथीहरूलाई आफू एनआरएनमा समेटिन्न कि भन्ने डर छ, साथीहरू ढुक्क हुनुस्, त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।
एनआरएनमा विद्यार्थीहरूले प्रवेश पाउने अवस्था किन बनेन?
केही विधानका जटिलताहरू छन् । हामी चल्ने भनेको आइसीसीकै विधानमा हो । त्यहाँ जे व्यवस्था छ त्यही अनुरूप चल्ने हो । विद्यार्थीहरूका लागि ‘नारी निकुञ्ज’ जस्तै समेट्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यद्यपी ४० हजार बढी विद्यार्थीहरूलाई समेट्न नसकेकोमा म निकै दुःखी छु ।
दुई–दुई कार्यकाल कमिटीमा बसिसकेर पनि के मुद्धा बाँकी रह्यो पूरा गर्न र अध्यक्षमा उठ्न लाग्नुभयो ?
मैले चार वर्षको अवधिमा भएका राम्रा कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र पूरा हुन नसकेको काम पूरा गर्नु छ । त्यस विषयमा बाहिरका साथीभाइ र शुभचिन्तकसँग पनि विस्तृत सरसल्लाह गरेको छु ।
कतिपय कुराहरू आफू कमिटीमा बस्दा थाहा हुँदो रहेन छ । त्यसकारण सबैको परामर्श, सहयोग र समन्वयमा अघि बढ्न चाहन्छु ।
हामीले एनआरएन अष्ट्रेलियाको आफ्नै कार्यालय र सचिवालय बनाउने कुरा यस अगाडि नै उठाएका थियौँ । विविध कारणले पूरा हुन सकेन । तर, यस पटक सिड्नीमा कार्यालय बनाएरै छाड्छौँ ।
विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल पुनर्निर्माणको अभियानमा छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको केही योजना छैन ?
भूकम्पपछि नेपाललाई कसरी पुनः निर्माण गर्ने भन्ने नयाँ प्राथमिकताको विषय हो । त्यसका लागि हामी अष्ट्रेलियामा एउटा टीम बनाउँदैछौं । त्यसले यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारसँग सम्बन्ध बढाउने काम पनि भईरहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा त नेपालको विपद् व्यवस्थापन नै हाम्रो प्रमुख एजेण्डा हुनेछ । हामी यहाँ बसेपनि सोच्ने नेपालको बारेमा नै हो । भूकम्प लगत्तै सात लाख ५४ हजार पैसा हामीले नेपाल पठाइसकेका छौँ । अब १० लाखको हाराहारीमा पैसा उठाउँदै छौँ ।
नेपालमा यति घर बनाउछौँ भन्ने प्रतिबद्धता छैन तर के आवश्यकता छ त्यो गर्छौं । इन्जिनियरहरू, चिकित्सकहरू गएर हुन्छ कि के गर्दा नेपालको विपद्मा सघाऊ पुग्छ त्यो गर्ने हो ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूको समस्या चाहिँ के हो ?
पछिल्लो समस्या एमआरपी हो । हस्तलिखित पासपोर्ट नोभेम्वर पछि फेज आउट गर्ने कुरा छ, त्यसबाट पर्न सक्ने असुविधाको व्यवस्थापन पनि हाम्रो दायित्वभित्र परेको छ ।
त्यस्तै अष्ट्रेलियामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हुने विविध घटनाहरूबारे तत्काल जानकारी आउँदैन । जस्तो भर्खरै मात्र दुई जना नेपालीको समुद्रमा डुबेर मृत्यु भयो । त्यसमध्ये मेरो एकजना क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यस्ता घटना समयमै थाहा नपाउँदा अन्यौलता उत्पन्न भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा पत्रकार साथीहरूको सहयोगमा एउटा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सोच मैले बनाएको छु । त्यसमार्फत दूतावास र सम्बन्धित निकायको सहयोगमा सूचना संकलन गर्ने र सत्य तथ्य चाँडोभन्दा चाँडो प्रवाह गर्ने प्रयत्न हुनेछ ।
त्यस्तै, अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूको समस्या पनि ठूलो छ । त्यसका लागि ‘हेल्प स्टुडेन्ट’ डेस्क राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसले उनीहरूको समस्या सुन्ने र समाधानका लागि प्रयत्न गर्छ ।
एनआरएन अष्ट्रेलिया पनि राजनीतिक विचारधारबाट निर्देशित/प्रभावित देखिन थालेको हो ? निर्वाचनमा त्यसको झल्को आयो भन्छन् नी?
म तपाईंलाई इमान्दारीपूर्वक भन्छु, अहिलेसम्म म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छैन । स्वदेशमा छँदा म निजी विद्यालयमा पढेँ । कलेज पनि केयूमा पढेँ । त्यसकारण कुनै पनि दल वा त्यसको भ्रातृ संगठनसँग मेरो हिमचिम हुने कुरा भएन । राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिने कुरै भएन । यस अघिका नेतृत्वहरू र वर्तमान साथीहरू कुन राजनीतिक विचारधाराबाट अभिप्रेरित हुनुुहुन्छ त्यो मेरो चासोको विषय होइन ।
अर्को कुरा संस्थामा एक्लै काम गर्ने कुरा आउँदैन । ठूलो संस्थामा कोही न कोही राजनीतिक विचारसँग निकटता राख्ने हुनु अस्वाभाविक होइन । तथापी एनआरएन कुनै राजनीतिक विचारधारबाट चल्नु हुँदैन ।
केन्द्रको मिसन र नेसनको मिसनलाई कसरी तालमेल गराउनु हुन्छ ?
नेपालको विपद् व्यवस्थापनको अलावा मैले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको लागि कुरा उठाउँदै आएको छु । नागरिकताको सवालमा आइसीसीको टीमको एउटा सदस्य म पनि हुँ । त्यहाँपनि जोडतोडले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा उठाएको छु । अर्को, नेपाली भाषाको उत्थान र विकास तथा अष्ट्रेलियाको र नेपालको सांस्कृतिक सहचार्यको भूमिका लागि मेरो क्रियाशीलता रहनेछ ।
मैले जति सिकेँ, यही एनआरएन र नेपाली समुदायमार्फत नै सिकेको हुँँ । आम एनआरएन र नेपाली समुदायको विश्वास जितेर नै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । त्यस कारण आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता रहने छ भन्नेमा म आशावादी छु ।